အောက်ခြေ Quick Settings - သတိပေးချက် | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » personalization Apps ကပ » အောက်ခြေ Quick Settings - သတိပေးချက် Customization
အောက်ခြေ Quick Settings - သတိပေးချက်စိတ်ကြိုက် APK ကို
သင်သည်သင်၏မျက်နှာပြင်၏ထိပ်မှာတဦးတည်းလက်နှင့်ရောက်ရှိရန်ခက်ခဲသည့်အမြန် settings ကိုနှင့်ဆိုင်ရာအသိပေးချက်များတွေ့ပါသလား?
အောက်ခြေ Quick Settings ကို Android သင်သည် Wi-Fi, Bluetooth Flash နှင့်အများအပြားပိုပြီးတူသော settings များကိုပြင်နိုင်ဖို့ခွင့်ပြု, သင့် screen ၏အောက်ခြေအမြန် setting ကိုနှင့်သတိပေးချက် panel ကို style အမျိုးမျိုးအဖြစ် apps များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက် shortcuts တွေကိုထည့်သွင်းမယ့်, ချောမွေ့မြန်ဆန်စွာနှင့်ဇာတိခံစားမှုပေးစွမ်းသည် လည်း panel ကို!
အောက် Quick Settings နှင့်အတူ, သငျသညျနောက်ဆုံးတော့လက်လှမ်းနှင့်ပိုပြီး၏တူညီသောလွယ်ကူခြင်းရနိုင်!
- စာပြန်ရန်, ပွင့်လင်း, ပယ်ချခြင်းနှင့်ဆိုင်ရာအသိပေးချက်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်
- Dynamic အကြောင်းကြားစာအရောင်များ
quick ပြင်ဆင်မှုအား Panel ကို
- ကနေရှေးခယျြဖို့ 40 + settings အမျိုးမျိုး
- ထို panel ကိုတစ်ဦးဖြတ်လမ်းအဖြစ်မည်သည့် app သို့မဟုတ် URL ကို Add
- (အတန်းနှင့်ကော်လံအရေအတွက်) ကို panel ကအုပ်ကြွပ်၏အဆင်အပြင်ကိုပြောင်း
- လျှောနှင့်အတူ Screen ၏ Brightness ကိုဖုန်းမြည်သံနှင့်မီဒီယာအသံအတိုးအကျယ်ကိုပြောင်း
- မျက်နှာပြင်တောက်ပသို့မဟုတ် volume အတှကျ panel ကိုဥပမာအနေဖြင့်လျှောဖယ်ရှားလိုက်ပါ Add /
- အန်းဒရွိုက်အမေးအဖြေ Pie ရေးရာ
အခြားအ Customization Options ကို
- ထို panel ကိုနောက်ခံ၏အရောင်များနှင့်အမြန် setting ကို icon တွေကိုပြောင်းလဲပါ
- ထို panel ကိုတစ်ဦးနောက်ခံပုံ Add
- app တစ်ခုအိုင်ကွန် pack ကို Select လုပ်ပါ
- ထဲက footer အရောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ navigation bar အရောင်နှင့်ယှဉ်တွဲ
Root / ADB ကနှင့်အတူအပို features တွေ Get
- ထိုသို့သောမိုဘိုင်းဒေတာများနှင့်တည်နေရာအဖြစ်လုံခြုံမှုစနစ် settings များကိုပြင်နိုင်ခြင်း။ အဲဒီ settings တွေကိုသာ Android ရဲ့လုံခြုံရေးကန့်သတ်မှုကြောင့်, အမြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ကြိမ် ADB က Command ဖြင့် toggled နိုင်ပါသည်
- သင့်ကိုယ်ပိုင် Backup တွေကိုဝေမျှနှင့်ဤကြေးနန်းအုပ်စုတွင်အခြားသူများအားအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး Backup တွေကိုသုံးနိုငျ: t.me/BottomQuickSettingsBackupSharing
အဓိကအမြန် setting များကိုအချို့သည်:
- Rotate mode ကို
- ည mode ကို
- Sync ကို
- Torch / ဖလက်ရှမီး
- NFC ကို
- Music ကိုထိန်းချုပ်မှု
- Wi-Fi ဟော့စပေါ့
- immersive မုဒ်
- သလိုမျိုးကက်ဖိန်းဓာတ် (နိုးမျက်နှာပြင်စောင့်ရှောက်)
- ထိုအခါပိုပြီး 20 ကျော်!
- Promo Video ကို: https://www.youtube.com/watch?v=A5XghIuvweE
- တွစ်တာ: https://twitter.com/tombayleyapps
– Telegram: https://t.me/joinchat/Kcx0ChNj2j5R4B0UpYp4SQ
- ပံ့ပိုးမှုဖိုရမ်တစ်ခု: https://forum.xda-developers.com/android/apps-games/app-quick-settings-t3864903
- မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ: https://sites.google.com/view/bottomquicksettings/faq
- Email: tombayleyapps@gmail.com
အသိပေးချက်များ, အရောင်များနှင့်အပိုဆောင်းအမြန် setting များကို: တချို့ကအပိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာအပါအဝင်တစ်ဦး In-app ကိုဝယ်ယူလိုအပ်
- Blur နောက်ခံ option ကို
- လျင်မြန်စွာဆက်တင်များကိုယခုအစား scroll မှရှိခြင်း၏စာမကျြနှာမှာပြနေကြသည်
- အမြန် setting များကိုခေါင်းစဉ်ဖျောက်ရန် Option ကို
- အမြစ်မပါဘဲ Screenshot
- ထစ်နှင့်အတူဖုန်းများပေါ်တွင် Status ကိုဘားယခုအရိပ်ဖြစ်ကြ၏
- အနိမ့်အင်ဖိုအတန်းနှင့် system icon တွေကိုတစ်ထုံးစံအရောင်တင်ထားရန် Option ကို
အောက်ခြေ Quick Settings - သတိပေးချက် Customization
4.01 ကို MB
edge လှုပ်ရှားမှု: Edge ...
အရည် Navigation ဟနျအမူအရာ
Assistant Touch ကို - ...
ဂိမ်း Mode ကို - အ ...
သတိပေးချက်ထဲမှာ Volume ကို
Touch ကိုကို iOS 12 Assist
မှတ်စုများ Widget Reminder
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Card ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို